प्लाज्मा थेरापीबाट कोरोना संक्रमितको उपचार : सरकार भन्छ- निःशुल्क गर, तर ८ हजार रुपैयाँ असुल्दै अस्पताल
२०७७ भदौ २८ आइतबार ११:०३:५७ प्रकाशित
काठमाडौं- सरकारले गम्भीर अवस्थामा पुगेका कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि कन्भ्यालिसेन्ट प्लाज्मा थेरापी विधिको परीक्षण (क्लिनिकल ट्रायल) गरिरहेको छ।
यो विधिबाट उपचार गर्दा अस्पतालले संक्रमितसँग शुल्क लिन पाउने छैनन्। जुन अस्पतालले प्लाज्मा थेरापी गर्नेछन्, ती अस्पताललाई सरकारले नै सोवापत् लाग्ने खर्च दिनेछ।
तर, केही अस्पतालले प्लाज्मा थेरापीका नाममा संक्रमितसँग ८ हजारभन्दा बढी रकम उठाउने गरेको पाइएको छ।
प्लाज्मा थेरापीबाट उपचार सेवा प्रदान गर्ने अस्पताललाई सरकारले नै त्यसवापतको रकम भुक्तानी गर्ने व्यवस्थाविपरीत अस्पतालहरुले मेसिनको खर्च भन्दै प्लाज्मा थेरापी लिने व्यक्तिहरुसँग ८ हजार ५ सय रुपैयाँ लिएको पाइएको हो।
सरकार माताहतकै त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जले समेत प्लाज्मा लिने व्यक्तिबाट यो रकम लिँदै आएको छ।
कोभिड-१९ भई गम्भीर बिरामी भएकालाई कोभिड-१९ निको भएको व्यक्तिको प्लाज्मा दिनका लागि अस्पतालले उक्त रकम मागेको हो। यो रकम बाहेक संक्रमितको रगत परीक्षणमा लागेको खर्च समेत समेत बिरामीले छुट्टै तिर्दै आएका छन्।
आफ्नो परिवारका एक सदस्यको प्लाज्मा थेरापी गराएका काठमाडौंका एक व्यक्ति भन्छन्, ‘अवस्था गम्भीर भइसकेकाले अन्य कुरा सोध्नतिर लागिएन। सरकारले प्लाज्मा थेरापीको क्लिनिकल परीक्षण गरिरहेको भन्ने सुनेको छु। तर त्यहाँ पैसा लिइएको पाइयो। ग्राण्डीले पनि शुल्क लिने गरेको छ।’
उनले आफ्ना परिवार सदस्य उपचारका क्रममा काठमाडौंकै एक निजी अस्पतालको आइसियुमा उपचार गराइरहेको र फेरि प्लाज्मा आवश्यक पर्ने बताएकाले उपचारमा असर पर्ने भन्दै आफ्नो परिचय नखुलाइदिन अनुरोध गरे।
पैसा तिर्न सक्ने बिरामीले लाखौँ तिर्न तयार भए पनि उपचारका लागि रकम जुटाउन नसक्ने बिरामीका लागि भने अन्याय भएको बिरामीले गुनासो गरेका छन्।
अर्का एक बिरामीका आफ्न्त भन्छन्, ‘सरकारले अस्पतालहरुलाई पैसा दिने भनेपछि उनीहरुले सरकारसँग त पछि जसरी पनि लिन्छन्। अनि यता बिरामीसँग पनि किन लिने? निःशुल्क भनेर प्रचार गर्ने तर बिरामीसँग यति धेरै पैसा लिने, यो त लुट्ने नियत हो नि।’
नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदका कार्यकारी प्रमुख डा प्रदीप ज्ञवालीले कुनै पनि अस्पतालहरुले कन्भालिसेन्ट प्लाज्मा थेरापीका लागि बिरामीबाट शुल्क लिन नपाउने बताए।
उनले भने, ‘जहाँ कल्भालिसेन्ट प्लाज्मा थेरापी भइरहेको छ, ती अस्पतालले बिरामीबाट शुल्क लिन पाइँदैन। बिरामीले तिर्नु पनि पर्दैन। परिषद्ले ती अस्पताललाई चिकित्सक, अन्य कर्मचारी, ल्याब लगायतमा हुने खर्च दिन्छ। बिरामीलाई रगत लिएर आउँदा–जाँदा लागेको यातायात खर्च समेत परिषदले नै दिने भनेका छौँ। यसो भन्दाभन्दै पनि अस्पतालहरुले किन शुल्क लिएका छन्, यो विषय बुझ्नुपर्छ।’
उनले परिषद्बाट रकम निकासा भएपछि बिरामीलाई फिर्ता गरिने गरी लिइएको हुनसक्ने अनुमान गरे।
तर, अस्पतालले भने कन्भालिसेन्ट प्लाज्मा थेरापी बापतको रकम सरकारबाट नपाएकाले बिरामीसँग लिइएको बताएका छन्।
त्रिवि शिक्षण अस्पतालका कोभिड–१९ फोकल पर्सन डा सन्तकुमार दासले राष्ट्रिय स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले अहिलेसम्म कुनै पनि खर्च नदिएकोले प्लाज्मा बनाउँदा लाग्ने खर्च, रगत परीक्षण गर्दा लाग्ने खर्च उठाउनु परेको बताए।
उनले भने, ‘भनेजस्तो त कहाँ हुन्छ र? अहिलेसम्म हामीले एक रुपैयाँ पनि पाएका छैनौँ। भन्न त रेम्डेसिभिर औषधिको पनि पैसा दिने भनिएको थियो, खोई त्यो पनि दिइएको छैन।’
उनले प्लाज्मा बैंकका लागि डोनर खोजिरहेको र सो भएपछि सो शुल्क नलिने बताए।
सबैभन्दा पहिले कन्भालिसेन्ट प्लाज्मा थेरापी शिक्षण अस्पतालकै बिरामीलाई दिइएको थियो। सो समयमा प्लाज्मा भने ग्रान्डी अस्पतालबाट बनाएर ल्याइएको थियो। अहिले भने शिक्षण अस्पतालमै प्लाज्मा बनाउन थालिएको छ।
अस्पतालकै ७ बिरामी र निजी अस्पतालमा उपचाररत बिरामीका लागि प्लाज्मा बनाएर दिने गरेको डा दासले जानकारी दिए।
राष्ट्रिय स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्का अनुसार देशका २७ सरकारी र निजी अस्पतालमा कन्भालिसेन्ट प्लाज्मा थेरापी र रेम्डेसिभिर औषधिको क्लिनिकल परीक्षण भइरहेको छ।